Division Gov. News | eTanitharyi
Home » Division Gov. News
Division Gov. News
ထားဝယ် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ၁၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်း‌ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၁) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
ထားဝယ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ယနေ့ ၁၆၃၀ နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးတို့သည် တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ လိုက်ပါလျက် ထားဝယ်လေဆိပ်အတွင်း လေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ ချုံနွယ်များ ရှင်းလင်းနေမှုအခြေအနေအား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များမှာကြားရာ လေဆိပ် တာဝန်ခံက ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ (၂/၂၀၂၀-၂၀၂၁) အစည်းအဝေးကျင်းပ
ထားဝယ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ယနေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီ အချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေး ခန်းမ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ (၂/၂၀၂၀-၂၀၂၁) အစည်းအဝေးကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အစည်းအဝေးသို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ရီရီချိုနှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၁၇.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ ခရိုင်များအလိုက် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိသူများအား COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်/ ကုသခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ